Vanowanzopedza gays muKenya - eGay Shop
Kazhinji anowanzoita gays muKenya
Yakatumirwa neGTranslate Collaborator
Africa haisi nzvimbo yakagamuchirwa nevakawanda panyika kuti iite zvepabonde pachena. Kutambudzwa kune nzvimbo yakawanda uye inogona kusanganisira "kuongororwa kwezvokurapa." Mukukunda kwemunharaunda weGGBTQ, dare reKenya rakapa mutongo kuti kuongororwa kwakaoma kwechirwere hakubvumirwi nemutemo.
Vatongi vakati "kuisa pasi pevanyori vemapurisa akaremesa kodzero dzeVapfuridziri pasi peChinyorwa 25, 27, 28 uye 29 yebumbiro remitemo" uye "kushandiswa kwehupupuri hwakawanikwa kuburikidza nekuongororwa kwakaitwa kwevanokumbira pamhosva dzavanopikisana navo kuputsa kodzero dzavo pasi chinyorwa 50 chebumbiro remitemo. "
"Kutonga iri danho rakakura kwete kungosimudzira ruremekedzo rwevanhurume vanoita zvepabonde avo vainge vaiswa pasi pekunyadzisa kwekuongorora kwechirwere asiwo kune mutemo weKenya," akadaro Eric Gitari, mutungamiri mukuru we National Gay and Lesbian Human Rights Commission (NGLHRC).
I NGLHRC yakaunza nyaya kumatare. Varume vaviri vakasungwa mu2015 vachinyunyuta zvekuita zvepabonde, izvo zvisiri pamutemo muKenya. Varume vacho vakanyatsoongororwa nevakuru vehutano muchipatara muMombasa. Vakatomanikidzwawo kutora HIV.
HIV muAfrica chirwere. 91 muzana yevana venyika vane hutachiwana hweHIV vanogara muAfrica uye vanhu vane mamiriyoni e23.8 varipo vane chirwere ichi.
Nyaya iyi yaiva chikwata sezvo NGLHRC yakarasikirwa mu2016 apo Mombasa High Court yakatonga matanho akadai ari pamutemo. Dare reKutsvaga rakaputsa izvozvo.
Iko <A HREF= "https://s3.amazonaws.com/PHR_other/statement-on-anal-examinations-in-cases-of-alleged-homosexuality.pdf"> Gulu reVadzidzisi veIndaneti yeEperson Forensic </a> vakawana idzi zviedzo iri kubatsirana kubva mumakore akapfuura uye hauna hutano hwehutano. Mutsara unoti, "nokuda kwekuita kwekuongorora kwechirwere chakaitwa nemaitiro mukutarisa kwepabonde rekuita zvepabonde. Mukurapa, kubvumirana kweimwe muedzo kunoenderana nekunzwisisika kwaro (kukwanisa kwekuedza kujekesa avo vane chirwere / chiitiko chekufarira) uye kunyanya (kukwanisa kwekuedza kujekesa avo vasina chirwere / chiitiko chekufarira). Hapana zvidzidzo zvinoratidza kushushikana kana zvakananga zvekuongorora maitiro emadhigirii kuti vaone kubatana kwepabonde. "
Izvo NGLHRC inopesanawo nemutemo weKenya unotaura ungochani unobvumirana nemutemo. Mutongo weDare reKutsvaga unotarisirwa kunopera munaEpril.
iyo yakanakisisa cbd mafuta pamusika